तपाइको भाग्य चम्काउनु छ ? यी चीजहरु मध्ये एक चिज नछुटाई घरमा राख्नुहोस् … – News Nepali Dainik
तपाइको भाग्य चम्काउनु छ ? यी चीजहरु मध्ये एक चिज नछुटाई घरमा राख्नुहोस् …
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: २१:०५:४७
मानिसहरु घरलाई आर्कषक र राम्रो बनाउनको लागी घरमा विभिन्न किसिमका आकर्षक खालका सामानले सजिसवाज गर्ने गर्दछन्, जसले घरलाई निकै सुन्दर बनाएको हुन्छ ।
तर वास्तु शास्त्रमा घरमा कस्ता समान राखेर मात्र सजाउन मिल्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । घरमा राख्न नहुने समान राखेमा घरमा निकै हानी गर्दछ ।
हिन्दुशास्त्रमा मात्र नभएर चिनियाँ संस्कृतिमा पनि वास्तुशास्त्रको विश्वास गरिएको छ । घरको सुख शान्तीको लागी चीनमा धेरैले चीनमा फेंगशुई घरमा सजाएर राख्ने गर्दछन्।
यसैप्रति त्यहाँका नागरिकले विश्वास गरेका छन्, उनीहरुको धारणा के छ भने फेंगशूई घरमा राख्नाले घरमा सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा फेंगशूई प्रति केहि नेपालीहरुले पनि आकर्षितको साथमा यसप्रति विश्वास लिन पनि थालेका छन् ।
१) लाफिङ बुद्ध
कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन् भने लाफिङ बुद्ध घरमा राद्यन सक्नुहुन्छ, यसलाई राख्दा घरको मुख्यद्धारको छड्के तिर राख्नुपर्दछ । लाफिङ बुद्धलाई चिनियाँ वास्तुशास्त्रमाबुद्धको समृद्धिका देवता रुपमा लिएको छ।
२) तीनखुट्टे भ्यागुतो
घरमा तीनखुट्टे भ्यागुतोलाई राख्नाले निकै भाग्यशाली हुने मानिएको छ । घरमा मुखमा सिक्का च्यापिरहेको तीनखुट्टे भ्याकुता मूर्ति राख्नाले भाग्यदय हुनेकुरा चिनियाँ वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो भ्याकुताले घरको वातावरणलाई पनि सुखमय बनाइदिनेछ, तर भ्याकुतो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहि विचार गर्नुपर्दछ, भ्याकुतालाई भान्सामा, बाथरुमभित्र र छेउछेउमा राख्नुहुदैन्, यस्ता ठाउँमा राखेमा भने दुभाग्य बढेछ । यस्तो भ्याकुतो मुख्यद्धारको छेउछाउमा राख्नुपर्दछ ।
३) तीन सिक्का
धन र ऐश्वर्य एवम् समृद्धि प्राप्त गर्नको लागी घरको मुख्यद्धारमा रातो रिबनमा बाँधिएको फेंगसुईका तीन वटा सिक्का झुन्ड्याउनु पर्दछ । तर बाहिरी भागमा भने झुन्ड्याउनु हुदैन्, बाहिर झुन्ड्यएमा लक्ष्मी ढोकामा मात्र रहने शास्त्रमा उल्लेख छ । त्यसैले मुल ढोकाको भित्री भागमा झुन्ड्याउनु पर्ने छ।
५) गोल्डेन फिस
फेंगसुईका उल्लेख गरिए अनुसार घरमा गोल्डेन फिस राखेमा सौभाग्य, धनसम्पती मान सम्मान वृद्धि हुनेछ । यसलाई बेडरुम, भान्सा वा बाथरुममा भने राख्नु हुदैन्, सदैभरी यसलाई ड्राइङ रुममा राख्नुपर्दछ ।
६) पवन घन्टी
Last Updated on: February 7th, 2021 at 9:05 pm